Mila Kunis amin'ny endriny mahafinaritra hita tao amin'ny fetiben'ny CinemaCon tany Las Vegas
Andro vitsy lasa izay tany Las Vegas, nisy fetiben'ny sarimihetsika natomboka, antsoina hoe ComiCon. Raha ny fitsipika, dia misy kintana maromaro lehibe indrindra ary ny mpilalao sarimihetsika 34 taona, Milan Kunis, dia niditra an-tsoratry ny mpanao gazety. Tamin'ity hetsika ity dia tonga ny olo-malaza, ary tonga nanolotra ny sariny vaovao "Spy izay nanosika ahy."
Mila mampiseho sary tsara tarehy
Tao amin'ny carte de bordeaux, Kunis, 34 taona, dia nanao akanjo mahaliana. Ny vehivavy dia afaka mahita fotsy mainty izay mipoitra amin'ny "zest" - teboka miolakolaka miaraka amin'ny tendron-bozaka, ary satroka vita amin'ny hoditra mainty sy maitso. Mba hahatonga ny sary ho feno, dia nanasa kiraro mainty tamin'ny kiraro tongotra i Mila. Ary ankehitriny aho te-hilaza teny vitsivitsy mikasika ny volo sy ny tarehimarika izay nasehon'i Kunis. Ny mpilalao sarimihetsika dia namongotra, nanofahofa kely azy ireo, ary nanao lamaody tamin'ny loko voajanahary, nametraka ny mason-koditra mainty, ary teo amin'ny molotra somary marevaka.
Taorian'ny fisehoan'ny sarin'i Kunis tao amin'ny aterineto, tao amin'ny tambajotra sosialy, afaka mahita lahatsoratra ianao izay ny votoaty: "Mila sahiran-tsaina i Mila. Tena tiany aho ary ity adin-tsaina ity dia lasa adala "," Fifangaroana akanjo manga sy akanjo. Tena sarotra ny sary. Fantatr'i Kunis ny fomba fitafy amin'ny tsiro. Tsara izany! "," Tena tia an'i Mila foana aho. Vehivavy tsara tarehy izy ary mahafantatra ny fomba hipetrahana an'io fahamendrehana io. Tena mahafinaritra io sary io. Tiako izany! ", Etc.
Ankoatra an'i Kunis ao amin'ny kitapo fandroana dia afaka mahita ny mpiara-miasa aminy ianao amin'ny kitapo Keith McKinon, izay nandray anjara lehibe tao amin'ny kasety "Spy izay nandroaka ahy". Talohan'ny fanambaran'ireo mpanangom-baovao dia niseho tamin'ny akanjo mainty hoditra i Kate, ny loko mitovy sokajy ambony sy ny kapa mena miaraka amin'ny kiraro avo.
Keith McKinnon sy Mila Kunis
Sarotra ny mahafantatra: Mila Kova nanova ny endriny ny Mila Kunis
Ashton Kutcher sy Mila Kunis dia nihomehy niaraka tamin'ireo ankizy tao amin'ny Park Beverly Hills
Mila mampiasa ny fandaharana amin'ny fahitalavitra "The Show of the 70's" i Mila.
Taorian'ny fanehoan'ilay horonantsary dia tapitra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao tamin'i Kunis, izay novalian'ilay mpilalao sarimihetsika samihafa. Ny iray amin'izy ireo dia niahiahy ny horonantsarin'ny fahitalavitra "Show of the 70's", izay napetrak'i Mila Mila miaraka amin'i Ashton Kutcher vadiny. Nanontany tena ireo mpanao gazety raha te-hanohy hiasa amin'ity sarimihetsika ity i Kunis. Izao no navalin'ilay kintana amin'ny efijery:
"Fialam-boly maro no nitifitra tamin'ity horonantsary ity. Zanaka isika, ary avy eo dia nihevitra isika fa taorian'izay dia ho lasa vadiko i Ashton, tsy ho vita izany. Miaraka amin'ny mpilalao maro avy amin'ity kasety ity, mbola manana fifandraisana am-pirahalahiana foana isika. Mazava ho azy fa samy manana ny fiainany manokana izy ireo, saingy heveriko fa raha manolotra antsika hiala amin'ny fanatontosana ny "Fampisehoana amin'ireo taona 70 ireo mpamokatra," dia maro no nanaiky izany, ary anisan'izany aho. "
Vin Diesel tamin'ny fahatanorany
Orlando Bloom nahita olona vahiny tany Malibu
Nofafan'i Kendall Jenner ny pejiny ao amin'ny Instagram mba hiverina amin'ny molotra vaovao?
I Ciara dia lasa ambasadaoron'i Pandora
Lucky Blue Smith sy Stormy Bree no lasa ray aman-dreny voalohany
Miles Teller dia nosamborina noho ny lozisialy
Keira Knightley dia afaka milalao ny empira lehibe indrindra
Ahoana ny fampiharana ao amin'ny gym tsy misy mpanazatra?
Ilay mpilalao sarimihetsika, Liv Tyler, dia nivondrona teo ambanin'ny fampakarana
Garnet - toetra mahasoa sy fanoherana
Dress-case ho feno
Prince Harry dia nanao fanambarana mahaliana teo am-piandohan'ny Lalao Invictus
Karazam-boa vaovao avy amin'ny fifantenana Siberiana
Fitiavam-batana amin'ny akanjo
Neslihan Atagul sy Burak Ozchivit - avy amin'ny namana ho fankahalana ny dingana iray
Karazana kiraro haingam-pandeha - fifantenana ireo sary malaza indrindra
Engistol ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba hanakana ny lehilahy saro-piaro - toro-hevitra amin'ny psikology
Boots amin'ny fahavaratra amin'ny lavaka
Sakafo "The Seven Petals"